Ny tantaran'i Orsay dia toa ny garan-tsarimihetsika Haydarpaşa | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
HomeIZAO TONTOLO IZAOEOROPEANINA33 FranceNy tantaran'i Orsay dia toa ny garan-tsarimihetsika Haydarpaşa
09 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 33 France, EOROPEANINA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Headline 0
ny tantara orsayin dia toa an'i gardarpasa garina
Ny tantaran'i Orsay dia mitovitovy amin'ny Haydarpaşa Fiaran-dalamby: 1939 dia tranobe tsy misy ilany very ka nanjavona ny toetran'ny toeram-piantsonana satria tsy mety amin'ny gara lava. Ao amin'ny 1970 dia mieritreritra ny handrava ny trano sy ny fananganana hotely izy ireo. Rehefa manohitra ny Parisianina dia nanapa-kevitra ny governemanta hamadika tranom-bakoka ao amin'ny 1977. Nosokafana tamin'ny 1986, ny Orsay Museum 32 dia nampiantrano mpitsidika 93 maherin'ny iray tapitrisa isan-taona.
Wallpaper Newspaperavy amin'i Melishan Devrim; Ny Musée d'Orsay dia iray amin'ireo adiresy be mpitsidika indrindra teto Paris, tsy amin'ny resaka angonany ihany, fa koa asa asan'ny zavakanto. Raha ny tranoben'ny Orsay (Palais d'Orsay), naorina nandritra ny vanim-potoana Napoleon, dia nodorana nandritra ny Kaomina 1810 Paris, tranobe gara lehibe no namboarina teo amin'ny tranon'ny lapa. Ny fisokafan'ny tranobe gara dia nifanandrify tamin'ny fanokafana ny 1871 Paris Universal Exhibition, ary ny fahatongavan'ireo vahiny tonga avy any ivelany dia ny Paris Orsay Station. Ny tranobe misy ny 1900 metatra lava no trano lehibe indrindra 'indostrian'ny vanona tamin'izany fotoana izany amin'ny metaly 175 arivo taonina, fa ny rafitry ny metaly manontolo dia nafenina ao ambadiky ny rindrin'ny haingo ornate hifanandrinana amin'i Louvre. Ny fananganana toby, izay efa saika 12 nandritra ny taona, dia nanjary very andraikitra noho ny fampidirana ireo lamasinina lava kokoa ao 40.
Ny Frantsay dia liana mafy tamin'ny zavatra azony vitan'ny kolontsaina sy ny zavakanto nananany taorian'ny Ady 2.World. Sambany teo ambany fiahian'i Charles de Gaulle no napetraka ny minisiteran'ny Kolontsaina. André Malraux, izay voalohany voatendry tamin'ity ministera ity dia mpahay tantara ara-javakanto, izay tena liana amin'ny sehatry ny psikolojia ara-javakanto. Na dia tsy nisy ny fandrosoana lehibe nandritra ny vanim-potoana Malraux, izay minisitry ny kolontsaina voalohany ao amin'ny 1959-1969, ny Parisianina dia matanjaka hatrany amin'ny fiarovana ny tanànany.
Orsay Station, izay tsy mbola nampiasaina hatramin'ny 1939, dia nifanandrina mivantana tamin'i Louvre, ao afovoan-tanàna. Ny governemanta vaovao, variana noho ny fisian'ny tranobe iray eo afovoan'ny tanàna, nanjary tsy nahomby ilay fahazoan-dàlana hamongorana ny trano fitobiana amin'ny 1970 hanoloana trano fandraisam-bahiny maoderina. Jacques Duhamel, minisitry ny kolontsaina aorian'i Malraux, izay nitarika an'io fanapahan-kevitra io dia nitarika ny politikam-kolotsain'ny governemanta ho amin'ny afovoany. Izy io dia nanapa-kevitra ny hamongana ny kolontsaina vitsy an'isa ho kolontsaina nasionaly iray. Duhamel, izay nahomby tamin'ny famindrana ny teti-bola natokana ho an'ny mpitantana eo an-toerana ho amin'ny ministerany dia namoy ny sezany tao 1973 ary nisy ny fanovana ny politikam-kolotsaina any Frantsa, ka izany no hialana amin'ny fianjeran'ny fiaran-dalamby Orsay.
FIVORIANA FAMPIDORANA TANORA
Tao amin'ny 1977, dia nanapa-kevitra ny hamadika tranom-bakoka ny tranoben'ny gara. Tao amin'ny 1975, ny French Museum Directorate dia nanolotra ity soso-kevitra ity ary nikendry ny hanao ity faritra ity ho faritra mozea, eo anelanelan'ny Louvre sy ny National Museum of Modern Art in the Georges Pompidou Center. 1978 dia nomena komisiona sivily mba hanara-maso ny fiovan'ny trano, izay nomena ny toeran'ny tsangambato ara-tantara, tao amin'ny tranombakoka, ary ny tranom-bakoka dia notendren'i François Mitterrand, filohan'ny fotoana.
MAMPIASA MOMBA NY FAMPISEHOANA NY AUTOMOTIVE
Ny fiovan'ny politikam-kolontsaina frantsay dia nandray anjara betsaka tamin'ny toekarem-pirenena. Ao amin'ny 1990, ny tranom-bakoka Louvre sy Versailles Palace dia nambara ho 'andrim-panjakana autonomous', ary navela hanana ny teti-bolan'izy ireo manokana ireo tranom-bakoka ireo. Ao amin'ny 2000, dia misy ny famporisihana isan-karazany toy ny fahatapahan-ketra natolotra ho an'ny andrim-panjakana tsy miankina izay mamatsy ny tranom-bakoka nasionaly. Nandritra ny ministeran'ny artista Malraux, ny indostrian'ny kolontsaina, izay 0.39 afa-tsy ny toekarena ao amin'ny firenena, dia nahatratra francs 1981 miliara an-tapitrisany any amin'ny 2,6 ary 1993 miliara francs ao amin'ny 13,8. Ankehitriny, ny haben'ny vola miditra amin'ny kolontsaina frantsay 7,3 lavitrisa euro.
MAMPITONDRANA NY FIAINANAO TSY MISY KILALAZA ANY GAR ARCHITECTURE
Nandritra ny fiovam-po tamin'ny gara Orsay fiaran-dalamby ho tranombakoka, ny singa maritrano marobe izay lasa sonian'ny tranobe dia tavela toy ny azy. Vita fitaratra misy rakotra fitaratra, efitrano lehibe misy valindrihana avo, famantaranandro mihetsika ao anaty efitrano fitobiana sy varavarankely misy lakilasy miova ho tranombakoka nefa tsy very na inona na inona amin'ny mari-trano taonjato 19. Raha jerena ny zava-misy fa taonjato 19 ny tranobe dia nafindra tao amin'ny tranombakoka ny tranom-bakoka efatra rihana. Ny sarivongana 1848.yüzyıl dia hita ao amin'ny efitranon'ny gara sy ny fanaka ary ny sarin'io vanim-potoana io dia naseho tao amin'ny tranombakoka. Eto amin'ny rihana ambony indrindra ny asa impressionista malaza indrindra. Ny famantaranandro eo amin'ny varavarankelin'ny tranoben'ny Orsay no faritra ankafizin'ny mpizahatany haka sary.
Ny tranom-bakoka Orsay, izay nizaka roa taona indray tao amin'ny 2011, mitentina 27 tapitrisa dolara, mitentina 3 tapitrisa mpitsidika isan-taona. Ao amin'ny famerenana farany farany, fomba iray no nampiharina tamin'ny fandokoana ny rindrina tamin'ny loko pastel mifanaraka amin'ny hoso-doko ary manambara ny loko amin'ny hoso-doko. Maherin'ny iray tapitrisa ny olona nitsidika ny tranom-bakoka hatramin'ny nisokafany tao 1986. Ny tranom-bakoka, izay ahitana ny sangan'ireo tantsaha frantsay malaza indrindra toa an'i Edouard Manet, Gustave Courbet, Vincent Van Gogh, Renoir ary Rodin, dia manao fampiratiana vonjimaika ihany koa hanitarana ny famoriany. Ao anatin'ny tranombakoka dia misy efitrano fanaovana auditorium sy efitrano fanaovana sinema.
Amin'ny maha andrim-panjakana tsy manam-paharoa, andao holazaina ny tranom-bakoka mankany amin'ny garan-dalamby any Haydarpaşa amin'ny resaka famelana ny tranom-bakoka amin'ny fitantanana ireo manampahaizana ary mitondra ny tranon'ny taonjato 19 amin'ny firenena misy fiasa vaovao.
Ny tantara mangidy ao amin'ny Trainstation Haydarpaşa! .. 06 / 02 / 2012 Ny hetsika 1 febroary 2012 tao amin'ny gara Haydarpaşa dia najanona nandritra ny 2 taona. Tian'ny olona ny fahatsiarovana azy. Ity fanamboarana seranam-piaramanidina ity dia feno fahatsiarovana saika ny vahoakantsika rehetra. Ho tombotsoan'ny serivisy kalitao toa ny YHT…
Tantara momba ny fiaran-dalamby any Haydarpaşa, Tantara momba ny fanamboarana ary fasana tany Haydar Baba 21 / 10 / 2019 Haydarpaşa Railway naorina tao 1906 II. Nanomboka tamin'ny fotoana nanjakan'i Abdulhamid ary vita tamin'ny 1908. Ny tobiny, izay naorin'ny orinasa Alemanina dia naorina ao III. Nomena anarana i Haydar Pasha, iray amin'ireo pashas avy any Selim. Manaova ...
Afo nidina tany amin'ny gara i Haydarpaşa | Fiaran-dalamby any Haydarpasa 10 / 11 / 2012 Ny afo nirehitra tao amin'ny gara Haydarpaşa: Tamin'ny voalohany fihainoana ny raharaha momba ny afo tao amin'ny gara Haydarpaşa, ny tsangambato tantara voalohany dia namboarin'ny mpiasa iray tsy voamarina.
Haydarpaşa Solidarity, natao tao amin'ny 300.Haftında Actions Haydarpaşa Garı Önündeydi 02 / 10 / 2017 12 no 300 ny hetsika alahady natomboka taorian'ny faran'ny ny serivisy fanamoriana Haydarpasa Solidarisiary izay niady tamin'ny fanovana izay tian'i Haydarpaşa Garda nandritra ny taona maro. Androany amin'ny 01.10.2017, 13.00 mankany 14.00 Hayd
Ny fiaran-dalamby Haydarpaşa dia niova ho YHT Railway Station 26 / 06 / 2018 Tao anatin'ny faritry ny tetikasa Istanbul Marmaray CR3 (fanatsarana ny sisin'ny tanàna ambanivohitra) dia mitohy ny famongorana ny lalamby sy ny fanavaozana ny làlana ao Haydarpaşa Station. Voaroaka ny lalamby sy ny natory aorian'ny faran'ny catenary.…
Ny tantara mangidy ao amin'ny Trainstation Haydarpaşa! ..
Afo nidina tany amin'ny gara i Haydarpaşa | Fiaran-dalamby any Haydarpasa
Haydarpaşa Solidarity, natao tao amin'ny 300.Haftında Actions Haydarpaşa Garı Önündeydi
Ny fiaran-dalamby Haydarpaşa dia niova ho YHT Railway Station
Taorian'ny fiantsonan'ny fiarandalin'i Haydarpaşa, nanjary tantara ny Railway Sirkeci.
Black Train Story of Bursa amin'ny faritra mainty sy fotsy
Ny filazan'ny JCC filoham-pirenena: tantaran'ny fiara Izmir Cable!
Metrobus dia tantaran'ny fisiana
Tantaran-dalamby iray misy antontan-taratasy
News Archive Safidio ny volana Novambra 2019 (276) Oktobra 2019 (608) September 2019 (557) August 2019 (509) Jolay 2019 (634) June 2019 (502) May 2019 (526) April 2019 (419) March 2019 (521) Febroary 2019 (483) Janoary 2019 (502) Range 2018 (620) Novambra 2018 (504) Oktobra 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) Jolay 2018 (506) June 2018 (582) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) Febroary 2018 (500) Janoary 2018 (557) Range 2017 (509) Novambra 2017 (426) Oktobra 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) Jolay 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) Febroary 2017 (477) Janoary 2017 (538) Range 2016 (487) Novambra 2016 (631) Oktobra 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) Jolay 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) Febroary 2016 (855) Janoary 2016 (751) Range 2015 (799) Novambra 2015 (640) Oktobra 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) Jolay 2015 (504) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) Febroary 2015 (878) Janoary 2015 (1076) Range 2014 (963) Novambra 2014 (826) Oktobra 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) Jolay 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (971) March 2014 (864) Febroary 2014 (720) Janoary 2014 (733) Range 2013 (664) Novambra 2013 (656) Oktobra 2013 (547) September 2013 (570) August 2013 (533) Jolay 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1058) March 2013 (1101) Febroary 2013 (811) Janoary 2013 (905) Range 2012 (911) Novambra 2012 (1167) Oktobra 2012 (829) September 2012 (886) August 2012 (970) Jolay 2012 (859) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (562) March 2012 (699) Febroary 2012 (546) Janoary 2012 (417) Range 2011 (149) Novambra 2011 (35) Oktobra 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) Jolay 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) Febroary 2011 (24) Janoary 2011 (13) Range 2010 (335) Novambra 2010 (11) Oktobra 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) Jolay 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) Febroary 2010 (303) Janoary 2010 (1838) Range 2009 (4) Novambra 2009 (1) Oktobra 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) Febroary 2009 (4) Janoary 2009 (3) Novambra 2008 (1) Oktobra 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) Jolay 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) Febroary 2008 (5) Janoary 2008 (2) Range 2007 (2) Oktobra 2007 (2) Jolay 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) Febroary 2007 (2) Janoary 2007 (1) Range 2006 (1) Oktobra 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) Novambra 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) Febroary 2005 (1) Janoary 2005 (1) Range 2004 (1) Oktobra 2004 (3) Jolay 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktobra 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) Febroary 2003 (1) Janoary 2003 (1) Range 2002 (1) Oktobra 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) Janoary 2002 (2) Jolay 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) Oktobra 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) Oktobra 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)